Izindaba - Izeluleko eziyisishiyagalombili zokuhlobisa ukwenza ikhaya lakho lilandele futhi lihambe
Sihlala njalo sifuna ezinye izindlela ezilula futhi ezinokwethenjelwa zokuhlobisa ikhaya lethu esilithandayo. Akunasidingo sokujaha impumelelo, zama kancane kancane, futhi uzothola kancane kancane izici zezinto ozithandayo futhi ozilangazelelayo. Kusukela kusithombe sangemuva esisha, kuya kufenisha eyenziwe ngezinto zemvelo kuya ekuhlobiseni kwe-retro, lezi zindlela ezishisayo zizokunikeza ezinye izinkomba.
01 Amandla wezinto ezimbali
Ezikhaleni eziningi, abantu bazosebenzisa imihlobiso yobuciko bezimbali ukunikeza umphumela omuhle, okwenza isikhala sibe sihle futhi sihle.
Ingilazi ekhanyayo ekhanyayo, evame ukuba nemibala ethambile, yakha umuzwa onjengephupho futhi omuhle. Egumbini lokutadisha elihle kakhulu, ukuthambekela kokukhanyisa, imininingwane yomoya nezitayela zokuhlobisa zobuciko bama-70s kuboniswa ngokuphelele.
Izinto ezihlanganisiwe zokuhlobisa zinobuhle obuhle kakhulu, futhi izici zazo ziguqulwa zibe umkhuba ongawethula kalula ekhaya lakho. Ingafinyelela lo mphumela ogqamile nenhle.
Okungajwayelekile futhi okucwengisiswe. Izitayela zokunquma ezingakwazi ukuhlanganisa imininingwane yobufazi nobucwebe, njengemigqa emibalabala esasibhakabhaka kanye nezitsha ze-amethisto, nezitayela ezingafani namatafula wezindlovu zobumba, imicamelo yengwe nemithi yesundu emhlophe, kubeka kabusha ukugqama komdlalo.
05Faka izinto zezilwane
Esinye isibonelo sokuchuma kwezindikimba kanye nokuhlobisa kwezilwane (nezinambuzane) kwenza lokhu kube ngumzuzu wokuthakazelisa onjalo okhombisa inhlanganisela yomhlaba wonke ethokozisayo njengamanje echaza ukwakheka kwanamuhla.
06 Dala umoya ofudumele
Umsebenzi wobuciko olengiswe ochungechungeni lwethusi olujiyile uyindlela entsha yokubonisa umsebenzi wobuciko. Ikhethini elisindayo elenga emnyango wekamelo lokulala kufanele libe lihle futhi likhululeke, elingaqokomisa ukuthamba nolayini abathandekayo bekamelo.
Ungesabi ukusebenzisa imibala emnyama, ecebile yodonga, ikakhulukazi uma ixutshwe nenhlabathi nezinto zomhlaba, ezingakunika ukujula nentshisekelo esikhaleni.
Ingxube yamaphethini wemidwebo yokuhlobisa nama-animal motifs aletha isimo sesimanje ngokubukeka okuqinile kokungathathi hlangothi egumbini lokuphumula.